Saka anglisy miloko roa, mainty sy fotsy: ny momba azy rehetra | Noti saka
Saka bicolor anglisy, mainty sy fotsy
Monica sanchez | | saka, miteraka
Sary - 4ever.eu
El saka britanika bicolor Io no karazany tranainy indrindra any Great Britain. Raha ny tena izy dia mbola mahita santionany marobe eny an-dalambe ihany isika anio. Na dia mety mieritreritra aza isika fa saka mahazatra io, izany hoe mongel, ny tena razamben'ity saka ity dia tena tsy mitovy amin'ireo volom-borona hitanao any an-tsaha.
Andao hofantarina lalina kokoa ho an'ity saka mahafinaritra ity.
1 Ny niandohan'ny saka anglisy
2 Mampiavaka ny saka britanika bicolor
4 Fikarakarana inona no ilainao?
Ny niandohan'ny saka anglisy
Mba hahitana ny niandohan'ity karazany ity dia tsy maintsy fantarintsika hoe avy aiza ny saka anglisy. Eny, Ity karazana ity dia nipoitra avy amin'ny saka saka any Roma, na mihoatra izany na latsaka, Roma, izay nanombohany nahazo ny fitiavana sy ny fanajana ny olona izay tsy ela dia talanjona tamin'ny fahaizany mihaza. Ireo biby volom-borona ireo dia voaporofo fa tena biby tsy mivadika izy ireo, ary izany dia zavatra izay, mazava ho azy, izay rehetra nankamamy saka tao an-tranony.
Nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia nanomboka nofidina ny saka tsara indrindra, hamerina azy ireo ary hanatsara ny karazany. Fotoana fohy taorian'ny nakana azy ireo tamin'ny seho sy fihaonana mba hametrahana izay ho fenitry ny fiompiana. Rehefa afaka folo taona vitsivitsy, Tamin'ny 1892 Harrison Weir (1824-1906) dia nanao fanadihadiana izay nanazavana ny toetran'ny saka britanika.
Nandritra izany fotoana izany, ireo saka ireo dia tena tian'ny rehetra, saingy indrisy fa ny ady lehibe roa dia hamono azy ireo. Ka maika ny hamerenana azy, noho izany Ny saka persiana dia nampahafantarina tamin'ny fandaharam-piterahana voafantina. Araka ny efa nampoizina, ny saka britanika dia nandova ny fototarazo ho an'ny volo lava, na dia tratra koa fa manana vatana boribory kokoa izy ary misy loko matanjaka kokoa.
Mampiavaka ny saka britanika bicolor
Ny saka britanika bicolor dia biby iray izay manana ny loko roa voafaritra tsara izy io, na fotsy / mainty, fotsy / voasary, fotsy / fanosotra na fotsy / manga. Samy zaraina mitovy ny alokaloka roa. Raha tena marina amin'ity karazany ity dia tsy maintsy fotsy ny olona latsaka ny antsasaky ny vatana ary ny roa ampahatelon'ny vatana dia tsy maintsy iray loko.
Volo ireo vitany ny nanohina ny fon'ny olona ny masony tsara tarehy sy ny vatany matavy fa tsy mijery matavy loatra. Saka lehibe sy hozatra izy izay milanja manodidina ny 5kg ho an'ny lahy ary 3-4kg ho an'ny vehivavy. Ny mason'izy ireo dia malalaka sy malalaka, volomboasary mainty na varahina. Fohy sy matevina ny rambony, ary kely koa ny sofiny.
Rakotra volony matevina ny vatany, izay mety ho fohy na lava miankina amin'ny karazany. Amin'ny endriny tena malefaka, -koa raha landihazo-, dia hanome antsika ny fiheverana fa mikarakara biby tototry isika izay tsy mijanona mivoaka .
Ny toetra sy ny fihetsik'ity saka ity dia tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha. Tena tia sy milalao izy, ka nivadika ho mpiara-miasa tsara ho an'ny karazan'olona rehetra, na mipetraka miaraka amin'ny ankizy izy na irery. Tiany ny milalao sy miaraka amin'ny mpikarakara azy, saingy tsy hiraharaha ny irery irery izy mandritra ny fotoana iasana ny fianakaviany.
Mazava ho azy, tokony ho fantatrao fa ny zanak'alika amin'ity karazany ity, toy ny saka rehetra, liana fatratra izy ireo ary ratsy toetra. Noho izany dia tsy maintsy omaninao ny tranonao amin'ny fahatongavan'ny mpikambana iray izay mila ampianarina fa tsy tokony hohamafisin'izy ireo amin'ny toerana manokana ny hoho, ary tsy afaka manaikitra na manaikitra izy ireo, raha tsy izany dia mety hanimba. Elaela ny fanatanterahana izany, fa amin'ny farany dia ho mendrika ny asa rehetra. Inona koa, amin'izao vanim-potoana izao dia mianatra haingana be izyHany ka misy ireo milaza fa ny spaoro ny ati-dohany, satria izay rehetra ampianarinao azy dia ho tsara ny hiafarany. Azo antoka.
Ny saka bricolor britanika dia iray amin'ireo felines afaka mampifaly ny fianakavianao mandritra ny androm-piainanao. Ary teny an-dalana mifanerasera tsara amin'ny saka hafa ary hatramin'ny alika mihitsy aza. Fa raha sanatria, dia tsara ny mampiaraha-miasa azy amin'ny maha zaza anao mba hialana amin'ny risika tsy ilaina. Amin'izay dia ho mora kokoa aminao ny hifanerasera amin'ny biby hafa, ka ho tonga sakaiza akaiky indrindra amin'izy rehetra.
Noho ireo antony rehetra ireo dia mazoto mitady orinasa izy. Teddy tsara tarehy izay tia manome sy mandray fitiavana, noho izany raha mitady namana mahatoky sy malina ianao nefa tsy isalasalana fa ity no hazakazakao.
Fikarakarana inona no ilainao?
Saka tsy mila fikarakarana bebe kokoa noho ny karazany hafa ity saka ity. Na izany aza, mety ny manosotra azy indray mandeha na indroa isan'andro (miankina amin'ny volony lava na fohy) mba hitazomana ny palitaony ho malefaka sy hamiratra. Amin'ny vanim-potoana fandatsahana, izay manomboka rehefa manomboka avo ny mari-pana ary mifarana rehefa mangatsiaka ny andro, dia tsy maintsy ampitombointsika ny refin'ny borosy, amin'ny fomba izay raha lava volo ianao dia hataontsika hatramin'ny in-4 / isan'andro, ary raha manana fohy dia in-2 / andro. Ho fanampin'izay, hosakanantsika tsy hamorona ireo volon-doha natahorana izany dia mety hiteraka fahasimbana betsaka amin'ny lalan-dra mandevon-kanina.
Zavatra iray hafa izay tsy tokony hohadinointsika dia ny mividiana fitoeram-pako ho azy. Satria saka lehibe izy ireo dia mety ny misafidy iray izay malalaka sy somary avo, ka tsy azonao esorina aminy ny fasika rehefa mandeha manala tena ianao. Toy izany koa, tokony hapetraka ao amin'ny efitrano mangina, izay tsy ipetrahan'ny fianakaviana, ary lavitry ny feeder sy ny fandriany foana.
Ny lahatsoratra manala dia iray amin'ireo 'kilalao' izay tsy tokony hananan'ny saka tsy misy. Ny tena atoro anao dia ireo izay mahatratra ny valindrihana, fa raha tsy tianao fotsiny dia azonao atao ny misafidy ny mametraka talantalana fonosina amin'ny tady raffia mihantona amin'ny rindrina amin'ny haavo samy hafa mba hahitanao azy ireo avy any ambony.
Ny saka britanika miloko roa dia tena tiana sy ankafizin'ny mpitia an'ireny felines kely ireny. Noho ny toetrany sy ny toetrany, dia mahatonga ny olona an-tapitrisany hitia amin'ny fitiavana erak'izao tontolo izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Saka saka » saka » Saka bicolor anglisy, mainty sy fotsy
83 hevitra, avelao ny anao
Itay pinto dia hoy izy:
Fampahalalana tena mahaliana misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Itay Pinto
orana dia hoy izy:
Tena tiako ny nahita an'ity pejy ity tamin'ny Espaniôla, tsy dia nahita vaovao betsaka momba ireo saka ireo tamin'ny Espaniôla aho. Raha izaho manokana dia nanana saka bicolor mainty sy fotsy aho, Felix no anarany, mihoatra ny saka ahy ny namako, ny zanako lahy, ny fifalian'ny trano, (tsy manan-janaka izahay) Tsy noeritreretiko mihitsy hoe handeha vetivety izy, salama, tena zavatra tena manokana, taorian'ny nahafatesako dia ketraka aho, io no zavatra kely indrindra nananan'i James hatrizay, notazominy foana aho tao an-trano, saka be fitiavana, marani-tsaina izaitsizy, na izany aza manolo-tena ho an'izay te hanao ento mody namana kelikely ity sakazy mahafinaritra ity amin'ny maha orinasa anao. Manana Persiana roa tiako be aho fa amin'ny toetra tsy misy atao. Roa herinandro lasa izay ny vadiko dia nitondra ahy loko kely roa, mitovy amin'i Felix roa volana ho fanomezana, manantena aho fa ho lasa manokana toa an'i Feliksa izy. Misaotra betsaka anao nizara ity vaovao ity.
Mamaly an'i Yağmur
Misaotra anao 🙂.
Mérce dia hoy izy:
Manana bicolor aho, sahala amin'ilay misy telozoro fotsy amin'ny tarehiko, io ilay nivoaka ny kely indrindra tamin'ny rehetra, saka kely izy, fa izy no sariaka indrindra, milalao, liana ary tia olona. Te-ho eo amin'ny misy anao izy, hahita izay hitanao, hanao izay ataonao, aloka izy, na mamafa ianao, na manoratra toa ny zava-drehetra, izy koa no tonga mihazakazaka ary mihanika avy ao aoriana hitoby ny soroko toy ny vorondolo koa dia manoroka. Nasainy variana sy faly daholo isika. Fahagagana, izy rehetra dia samy manana ny toetrany avy, izay mazava ho azy fa samy hafa be tokoa.
Mamaly an'i Mercè
Laura raozy dia hoy izy:
Manana zanak'omby bicolor aho ary ny lahatsoratrao dia nanampy ahy hahafantatra bebe kokoa momba azy
Tiako izany, misaotra
Valiny tamin'i Laura Rosas
Salama Laura Rosas.
Faly izahay fa tianao ilay lahatsoratra 🙂.
Tiako ilay lahatsoratra, ary tsara vintana aho fa manana iray izay feno telo taona. Sotro tavoahangy manomboka amin'ny 15 andro. Manoroka ahy izy ary mahafinaritra izany. Telo mirahalahy hafa noho izy no maty. Niseho tamin'ny voaloboka teo an-tokotaniko izy ireo. Mijanona eo aminy aho ary tiako izy noho ny fitiavana sy ny fahalehibeazany. Entiko mivoaka amin'ny tadiny aho. Misotro amin'ny renirano izy ary tiany matory amin'ny solosaina, ary betsaka kokoa raha velomina sy mafana. … Tsy azo faritana izany. Oroka an'ireo rehetra tia biby. Mandra-pahafatiko dia hamonjy izay rehetra miampita ny lalako aho
Nahaleo ny sarany.
Maniry aho fa ho betsaka ny olona toa anao, marina. Mampalahelo fa maro ireo manokana ampahany amin'ny fiainany hanimba saka ... saingy tsy ho irery ireo biby ireo 🙂.
Jonathan venwgas aguilar dia hoy izy:
Fanontaniana iray, avy any Valle de Bravo aho… aiza no ahazoako saka mainty misy saka fotsy
Valiny tamin'i Jonathan venwgas aguilar
Any Mexico i Valle de Bravo, sa tsy izany? Ity dia karazany tena tadiavina. Azo antoka fa hahita famonoana any amin'ny faritra misy anao ianao; na araka ny nolazain'i Mercè, amin'ny pejy toy ilay voalaza dia afaka mahita ny namanao vaovao ianao.
Niverina avy niasa aho ary hitako ny iray tamin'ireny, ny saka dia toa saka mahazatra ahy tokoa, halefako rehefa tratrako ary maloto sy noana ary te hiala aina, nodioviko, Napetrako teo amboniny ny ronono sy ny fasika, izao dia nangalatra ny fon'ny fianakaviana iray manontolo ity sakaiza kely ity, ary bebe kokoa izao hahafantarana ny razambeny, tsy hamela azy ho any amin'ny anjarany mihitsy isika, misaotra ny lahatsoratra
Ao amin'ny El Prat de Llobregat dia misy saka mainty sy fotsy efa nilaozana, hitako izy tany amin'ny toerana maro izay nametrahan-dry zareo sakafo, zavatra mahantra.
Raha misy olona te handray azy dia azoko lazaina aminy tsara hoe aiza izy io ary amin'ny faharetana dia azo esorina amin'ny arabe.
Manana saka mainty sy fotsy mitady ahy aho, nandany vola be aho nitady trano tany an-tendrombohitra
Tamin'ny andro mafana ny namako dia nilaza fa mila orinasa ianao raha tsy misy ny manasitrana, na dia nalahelo be aza aho, natahotra ary ny namako dia nitondra ahy tany amin'ny trano kely misy saka 22 ao amin'ireo trano tendrombohitra ary mazava ho azy fa tiako izany amin'ny faran'ny volana jona. toy ny hoe vavy na lahy, toy ny ahoana ny fitiavako ilay fotsy tamin'ny voalohany ary tsy navelan'izy ireo nitafy aho dia nofidian'izy ireo haka mainty sy fotsy ary na dia telo herinandro aza aho taloha aho naka azy, nomeko hohaniko tsapako fa maloto io, miaraka amina parasy aho naka rano mafana tamin'ny shampoo acaliptus tsy miandany nanjavona daholo ny loto ary nodiovin'ny bibikely indray mandeha isan-kerinandro mba hanafoanana ireo bibikely, na dia nomeko azy tavoahangy ary tao anatin'ny efa-bolana niainako dia nentiko tany amin'ny mpitsabo biby mba hahafahan'izy ireo mandinika hoe salama izy ary tao anatin'ny herintaona nanarona azy ho tony kokoa aho, soa ihany fa nanontany ireo fampielezan-kevitra tolotra 3 izy, faly be aho niaraka taminy ary 7 taona ny fiainany dia tsy mandao ny varavarana izy raha tsy miaraka amiko dia mijery izy, tsy afa-mandositra pa, miaraka amin'ny saka hafa mania izay mifanerasera tsara aminy ... manohy ity biby ity aho ary mbola hitohy hanana loko mitovy, mbola manana rambony fohy izy, mahafatifaty ary tiako be izy mifanerasera amin'ny alika alemà sy milalao na dia hehehehe dia manome ny bola izay arahinay azy
Soa ihany izy fa nahita anao tamin'io fuzzy io 🙂
Miarahaba antsika mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana 🙂. Mikarakara sy mankafy azy io mandritra ny taona maro.
Mercè: mahafinaritra be ny tantara, misaotra amin'ny rohy.
Blanca Belisa dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ilay lahatsoratra, efa nampianatra ahy be dia be izy io. Efa fantatro ny antony nijanonany teo anilako, efa azoko izy hatramin'ny iray volana sy tapany androany dia 13 taona izy amin'ny 4 aprily. Tena manala baraka. ????
Valiny tamin'i Blanca Belisa
Faly aho fa tianao izany, Blanca 🙂
Evelin Munar dia hoy izy:
Tena nahaliana aho nianarako bebe kokoa tamin'ny zanak'akanjoko tsara tarehy roa: malefaka izy ireo ary be fitiavana, mahafatifaty izy ireo ??
Valiny tamin'i Evelin Munar
Faly aho fa nahaliana anao izany, Evelin 🙂
Lconception Ledesma dia hoy izy:
Salama! Fanontana mahaliana, fa noho izy manabe azy tsy hanaikitra. Satria manaikitra antsika ny saka lalaovintsika, mazava ho azy mbola tsy manaikitra mafy izy io, na fantany fotsiny fa tsy mila manaikitra antsika izy, manana 2 volana
Valiny tamin'i Lconcepción Ledesma
Mba hampianarana azy tsy hanaikitra dia tsara ny hiara-milalao aminy foana amin'ny fametrahana kilalao eo anelanelantsika sy ny saka, ary tsy avelany hanaikitra antsika. Raha manao izany ianao dia hampijanona ny lalao izahay ary hiala.
Rehefa mandeha ny fotoana dia ho fantany fa raha manaikitra izy dia tsy misy lalao ... ary raha tsy misy lalao dia tsy afaka miala voly izy, zavatra izay mazava ho azy fa tsy tiany hitranga 🙂.
Aza manahy: ela na ho haingana dia hahazo ny hafatra.
ferr.inayao@gmail.com dia hoy izy:
Ny saka ko 7 volana. Nanjavona androany tolakandro izy. Matory foana izy izao. Tsy haiko na inona na inona momba azy. Miantra aho, mety nanenjika saka ve izy? firy taona no lasa mafana ny saka lahy?
Mamaly an'i ferr.inayao@gmail.com
Ny saka lahy dia afaka miditra amin'ny hafanana voalohany mandritra ny 6 volana.
Raha tsy neuter na voaroaka izy, dia azo inoana fa lasa nitady saka.
Na izany na tsy izany, afaka andro vitsivitsy (2 na 3 farafaharatsiny) dia tokony hiverina izy.
Miarahaba anao ary mirary soa.
Fernanda dia hoy izy:
Misaotra Monica. Ankehitriny dia ho tony aho na dia manaintaina aza ny tsy fahitana azy any an-trano. Tia biby aho ary ny saka dia toy ny zanakalahy. Manararaotra milaza lahatsoratra tena tsara ihany koa aho. fiarahabana
Valiny tamin'i Fernanda
Azoko ianao Fernanda. Indraindray ireo biby ireo dia manome antsika ny tahotra hafahafa. Fampaherezana be 🙂
Faly be aho fa niseho ny saka ahy, marina ny anao 3 andro lasa. misaotra anao nanome ahy ny finoana fa ho tonga ny pussycat
Vaovao mahafaly re izany, Fernanda! Tena faly ho anao roa aho 🙂.
Azoko atao izao ny manoro hevitra ny fametrahana rojo misy marika famantarana, ka ho sarotra kokoa aminy ny hahavery azy.
Edwin guambana dia hoy izy:
Waou, ny sakaikako dia bicolor, tsy fantatro ary raha voalaza araka ny toetrany izy dia sariaka be sy milalao ary ny olona rehetra amin'ny manodidina ahy dia tia azy satria mijanona tsy mikofoka sy milalao amin'ireo izay mitsabo azy tsara izy .
Valiny tamin'i Edwin Guambana
Azo antoka fa zanak'omby tena manokana 🙂. Ankafizo.
Irma dia hoy izy:
Nanana saka britanika aho ary omaly dia nanapoizina azy ireo, tonga izy ary nifanintona mandra-paha tsy zakany intsony. Tiako izy ary nokarakaraiko be dia be izay mamela ahy ho tony rehefa nomeko azy ny fitiavako sy ny fitiavako
Mamaly an'i Irma
Miala tsiny indrindra amin'ny nanjo ny sakao aho ry irma 🙁. Fampaherezana be.
Nanavotra ny iray tamin'ireny tamin'ny fahafatesana azo antoka aho, latsaka tao anaty vela-pandrika ho an'ny biby mpikiky tao amin'ny zavamaniry iray sakafo izy ary tamin'ny fotoana nahitako azy dia hoy aho hoe "hotehiriziko izy" ary nanomboka nanala volomaso, nanao vaksiny, nandro, nilalao sns. .. ary Ankehitriny dia 4 volana izy ary mahavariana miaraka amin'ny palitao malefaka sy mamirapiratra, tena fahan-kanina ary tiako izany! liana fatratra izy, be fitiavana dia manandrana miaraka foana izahay raha mbola afaka. 🙂
Valiny tamin'i Raúl
Miarahaba anao, Raúl. Maniry aho fa ho betsaka kokoa ny olona handray na hanavotra saka eny an-dalambe. Miarahaba 🙂
fer dia hoy izy:
Misaotra betsaka ahy ny torohevitrao
Mamaly an'i fer
Faly aho, fer 🙂
Tena tsara tarehy izy ireo 🙂
Evelyn dia hoy izy:
Misaotra, tsy fantatro ny taranaky ny zanako vavy tongotra efatra. Te-hahafantatra aho raha tsara ny manala volo sy ny volana firy.
Valiny tamin'i Evelyn
Raha ny fahitako azy, rehefa avy nanadio ny nofo rehetra izay niara-nipetraka sy niara-niaina tamiko dia tsara tokoa. Ny zotom-po sy izay rehetra aterak'izany dia azo sorohina, sorohina tsy ilaina ny vohoka, lasa tony ny saka,… tsara. Manoro izany aho.
Izy ireo dia azo esorina amin'ny 6 volana.
Ximena dia hoy izy:
Misaotra noho ny vaovao, manana saka bicolor aho, nalain'izy ireo teny an-dalambe izany ary rehefa avy niasa izy ireo ary nopotehiny, natolony tao amin'ny Facebook, nokarakarainay, efa 3 taona izao ary nilatsaka ny nifina sasany mivoaka, mividy sakafo anaty siny aho ho an'ny zanak'ondry ary tianao be izany satria ny saka saka dia tsy nihinan-kanina firy, tsara ve ny manome azy ronono ambany tavy?
Valio i Ximena
Eny, azonao omena tsy misy olana izany. Mazava ho azy fa raha manomboka manana lasantsy izy dia ajanony ny fanomezana azy, satria amin'izany dia tsy hanana fandeferana lactose izy (ny siramamy ao anaty ronono).
Maria Cristina Soto Valdivia dia hoy izy:
Salama namana, manoratra ho anao avy any Silia aho, manana zanak'akanjo britanika aho, nomeko azy ny DIVINE, ary foko izany, tsy tia saka mihitsy aho raha tsy nanao allergie ary izao dia miara-matory aminy mihitsy ary tsy hitako izay hatao ataovy tsy misy izany, tonga irery izy, nifankahita imbetsaka izahay rehefa niditra ny tranoko, ary indray andro dia nanaraka ahy izy rehefa nosokafako ny varavaran'ny trano fonenako, niditra tsotra fotsiny izy ary tsy nisy namoaka azy ... satria efa 2 volana izay ary tsy afaka miaina tsy misy purrs sy manaikitra intsony aho hehehehe. Misaotra betsaka anao amin'ny vaovao azoko izao fantatro hoe avy aiza ny vadiko ary ny zaza ... slds
Valiny tamin'i Maria Cristina Soto Valdivia
Arahabaina noho ny namana tongotra efatra vaovao ^ _ ^.
Lorraine dia hoy izy:
Manana zanak'ondry britanika bicolor izahay ary manan-janakavavy mahafinaritra aho izay mikarakara sy mikarakara azy. Ao an-trano izahay dia mankafy azy be
Mamaly an'i lorena
Faly aho. Ankafizo ny orinasanao sy ny purrs anao _ _ ^.
Jasbleidy dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao tamin'ity lahatsoratra ity, ankehitriny fantatsika hoe inona ny karazany ny Our Princess Kitt, hitako ihany koa ny karazana zanak'alika zaza 4 hafa izay noraisinay satria natsipy izy ireo = (fa ankehitriny manana azy ireo isika ary mahita trano izy ireo. = )
Misaotra Post tsara!
Avy any Kolombia!
Valiny tamin'i Jasbleidy
Faly izahay fa nanampy anao izany, Jasbleidy 🙂.
Fiarahabana avy any Espana.
Jessie dia hoy izy:
Manana iray mitovy karazana amiko aho, tena tsara tarehy, mandreraka be izy, milalao kely fotsiny 🙋😊 fampahalalana tena tsara, misaotra anao, fantatro bebe kokoa ny biby fiompiko🐈💞
Valiny tamin'i Jessie
Faly aho fa tianao io Jessie 🙂
Paulina dia hoy izy:
Salama, manana zanakalahy kely 8 volana antsoina hoe cracocha aho, ary raha tena manokana izy dia mivoaka mitondra hazo, hazo kely, nisy nilaza tamiko fa entin'izy ireo any an-trano izany satria fanomezana ho anao ry Kitty tena tia milalao izy tiako, rehefa manamboatra baolina taratasy aho ary manipy azy, dia lasa izy mitondra ahy aty amiko, nefa tezitra amiko izy izao, satria indray andro izy dia nijery teo am-pandriako dia noroahiko izy, ary noho izany Tsy mody intsony izy, inona no azoko atao raha izany, dia mipetraka amin'ny trano hafa tena akaiky ahy izy izao.
Valiny tamin'i Paulina
Omeo azy ny mpitsabo saka isaky ny avy. Tian'izy ireo izy ireo, ary azo antoka fa tsy haharitra ela akory raha hanakaiky anao izy ireo. Rehefa manao izy dia alaivo kely izy, saika tsy fitandremana, toa ny tena tsy tianao.
Mijere azy amin'ny maso tery. Io ho azy ireo dia mariky ny fitiavana sy fahatokisana. Raha mijery anao izy ary manjombona dia midika izany fa matoky anao koa izy.
Manantona azy nefa tsy mihetsika tampoka.
Tsikelikely dia hitovy amin'ny taloha ihany izy io.
Ana Karen JA dia hoy izy:
Niala i Felix saka, tsy dia fantatro loatra izay nanjo azy, nandao ny trano aho nandritra ny efatra andro ary navelako tany an-jaridaina niaraka tamin'ny saka iray hafa satria tsy tian'izy ireo ny mihidy. Ny raibeko dia mamela sakafo ho azy ireo isan'andro, ny roa andro voalohany tonga hisakafo, ny roa andro hafa dia tsy tonga izy. Tonga tamin'ny andro fahadimy aho, ary mandraka androany, tsy nisy fantatra momba azy nandritra ny dimy andro. Tena mahagaga ahy izany satria tsy nandao ny trano mihitsy izy. Avy any amin'ny arabe izy ary satria noraisiko izy dia tsy nandao ahy mihitsy izy fa te hiala fotsiny, tsy toa ny saka hafa izay liana fatratra amin'ny trano hafa. Matahotra be aho sao nisy nangalatra tamiko hanimba azy. Nolazaina tamiko fa nangataka saka mainty ny mpifanila vodirindrina amiko. Saingy tsy mainty tanteraka izy, misy teboka fotsy kely. Tsy hitako izay eritreretina, efa nodidiana izy, natahotra be sy be hatendan-kanina be izy, tsy azoko hoe maninona izy no tsy miverina. Any an-tsaha aho dia manana alika te-hanafika azy ireo, saingy nifamatotra, ho fiarovana azy ireo. Nolazain'izy ireo tamiko fa lasa izy noho ny adin-tsaina nijanonany teo amin'ny tany iray ihany. Nivoaka maraina aho ary tamin'ny alina niantsoantso azy teny an-dalambe, tsy hitako intsony izay hatao, tsy afaka mamela ny tenako aho! Tokony hihazona ny fahatokisako ve aho? Very ve izany? Nandeha nitady ahy ve ianao? Mba ampio aho azafady.
Valiny amin'i Ana Karen JA
Miala tsiny fa lasa ny saka 🙁
Mitadiava azy foana. Mametraha takelaka, anontanio ny mpifanila vodirindrina aminao, lazao amin'ny mpitsabo biby… Ny fanantenana no zavatra farany tokony ho very.
Mirary soa, ary mirary soa !!
Salama!!!!!!! Faly aho, tena faly, niverina ny saka ahy adiny iray lasa izay. Holazaiko aminao fotsiny, tazomy ny finoana, tsy nitazona azy aho, satria natahotra hijaly bebe kokoa aho, nefa niverina !!!!!!!!!!!!!! Ary izao dia malahelo azy fatratra aho, tsy handao ny trano na ny zaridaina intsony izy, raha tsy rehefa manara-maso azy ireo aho.lazaiko azy rehetra fa azo antoka fa nanampy izany, fa isaky ny alina aho dia nivoaka niantsoantso azy teny amin'ny arabe akaiky , ary mbola tao an-tranoko dia niantso azy indray aho mba hahitany ahy raha sanatria ka tsy vitako izany. Finoana sy fampaherezana lehibe ho an'ireo izay mandalo io fotoana io.
Misaotra betsaka anao Monica, tamin'ny teny fampaherezana nomenao ahy. <3
Tsara izany! Faly be aho, Ana. Misaotra anao nilaza taminay 🙂
extari dia hoy izy:
Manana zanak'ondry bicolor ao an-trano izahay toy ilay hita eo amin'ny sary fahatelo amin'ilay lahatsoratra. Hitanay tao anaty baolina iray teo afovoan'ny arabe io, ary mbola nandalo azy ny fiara, naatoninay ny lalàny ny fiara, nalainay ary nentinay nody. Nilaza taminay ny mpitsabo biby fa ho roa herinandro farafahakeliny izy ary nanome sakafo azy izahay. Satria efa nanana saka iray hafa izahay dia nieritreritra ny hitady trano fitaizana hafa ho azy, saingy nahasarika anay hatramin'ny fotoana voalohany izy, ka niaraka taminay nandritra ny telo taona mahery. Mahafinaritra, be fitiavana ary tia milalao, miara-mandry izahay. One love. Misaotra tamin'ilay lahatsoratra, hitako fa tena mahaliana.
Mamaly an'i extari
Faly aho fa nahaliana anao izany. Ary arahabaina ho an'ny saka 🙂
Salama Monica, mamelà ny saka manana ny vozon'akanjoko mena miaraka amin'ny lakolosy antsoina hoe Micky ary an'ny reniko izany, nitady azy hatraiza hatraiza izahay ary nametaka takelaka manerana an'i Majadahonda, very tamin'ny volana novambra na desambra 2015, azafady Mifandraisa aminay contact izaho amin'ny 609009383.
Manova ny sary izahay izao.
Tsy afaka manampy anao amin'izany aho, azafady. Any Mallorca aho.
Manantena aho fa hahita azy tsy ho ela.
Fampaherezana be dia be.
Laura Sanchez dia hoy izy:
Veloma amin'ny rehetra
Tiako ity karazana saka ity. Nanampy betsaka ahy ity pejy ity. Manana saka 5 amin'ity karazany ity aho amin'ny ankapobeny. Hitako teny an-dalana ireto saka ahy ireto ary notezaiko izy ireo; Tiako ny biby dia hiezaka ny handray an'izay afaka aho. 🙂
Valiny tamin'i Laura Sanchez
Reevec + ca shlinazya fishman shmiths dia hoy izy:
oooooo misaotra betsaka anao tamin'ny fampahalalana, tsy fantatro hoe inona no nantsoina ny zanak'akoho ary misaotra anao efa haiko, manantena aho fa hanohy hamoaka vaovao misimisy momba ny zanak'alika ianao 🙂
Valio i Reevec + ca shlinazya fishman shmiths
Eny, hanohy eto isika 🙂
Salama, fantatrao fa ny sakaikako dia Bicolor toy ny amin'ny sary mainty sy fotsy, hitanay teny an-dàlambe hotifirina izy, tokony ho telo volana izy, raha fintinina, tsy hitany mihitsy izay voalaza eto, tsara izy dia tena maratra ary tsy te ho saro-kenatra satria mihetsika eo noho eo amin'ny fomba mahery setra ary tsy dia tia olona velively, nefa mbola tia, manaiky ary mikarakara azy be isika. Inona araka ny hevitrao no nahatonga an'io fihetsika io, efa an-taonany mahery izy no niaraka taminay. Heverinay fa fony mbola zazakely izy ireo dia tsy maintsy nampijaly azy.
Eny, mety saka saka izy io, izany hoe, notezaina teny amin'ny arabe tsy nisy hifandraisany tamin'ny olombelona. Saingy azo inoana koa fa, araka ny filazanao azy, dia nampijalina izy ireo.
Atolory ny sakafony lena sy ny saka no entiny ary aza terenao hanao zavatra izy. Asao izy hilalao ary avelao izy hizaha ny tranonao.
Amin'ny faharetana dia tokony hahita fivoarana ianao.
Saida dia hoy izy:
Salama, manana saka iray izay tena mitovy amin'ny filazalazanao eto aho, malefaka be izy io, mainty sy fotsy, mainty kokoa noho ny fotsy, ary be fitiavana, ny hany zavatra dia tsy tiany ny fiarahan'ny olona maro noho ireo efa zatra mahita ao an-trano io, rehefa lasa any an-tranoko ny zandriko vavy 2 taona dia raisin'ny zazavavy izy ary mikiakiaka aminy ary tsy mila zavatra miaraka aminy izy fa tsy manao zavatra aminy koa na manandrana manafina, na izany aza, raha misy olon-kafa izay tsy mipetraka ao an-trano, dia mihazakazaka miafina ao an-trano fidiovana izy, zavatra iray hafa dia ny fitiavany ny trano fidiovana tiany mandry ao amin'ny fandroana sy ny seza fidiovana, ho an'ny trano fandroana izay ataony tsy dia mahazaka fanoherana be loatra, tsy tiany izany, manandrana mandositra izy fa tsy maninona ny manoratra an-trano, zavatra iray hafa dia tsy manamboatra fanaka izy, ny scratchers fotsiny dia mazava ho azy fa tsy notapahiko mihitsy ny hoho ka tsy mahatsapa tena mila mikorontana, mankahala fiara izy, tiany ny mijery eo am-baravarankely fa rehefa mipoitra ny fiara dia mandositra izy, mbola tsara be fa misaraka ireo saka n Na azo ampiharina aminy, tadiaviny foana ianao hikopaka azy, nanana olana taminy fotsiny aho ary io tamin'ny hafanana voalohany io dia nanisy marika ny akanjoko rehetra izy ary nanisy marika ny sofa ary maimbo tahaka ny pee izy fa noraisiko izy tany amin'ny mpitsabo nify ary natsipiko ary tsy Marka intsony, mazava ho azy fa tsy maintsy natsipiko ny sofa ary nosasana ny lambako rehetra🙄
Mamaly an'i Saida
Misaotra betsaka noho ny hevitrao.
Ny tena marina dia miavaka be ireto saka ireto. 🙂
Joseph Arnulfo dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana. Mpitia saka saka aho. Izy ireo dia biby miavaka ary indraindray dia tsy azo ovaina izy ireo. Manana zanak'ondry misy loko roa nalaiko aho ary nitondra fahasambarana betsaka teo amin'ny fiainako izany. Avy eo dia nilaza izy ireo fa mamitaka sy mety ny saka nefa lainga izany. Ny saka dia miraikitra amin'ny tompony ary tena mahatoky koa izy ireo.
Valiny tamin'i José Arnulfo
Manana zanany vavy anglisy miloko roa aho. Dia masoandro. Nanavotra azy aho nandritra ny 20 andro. Mitomany izy raha miala aho.Raha misy zavatra manjo azy dia tonga izy miteny amiko miaraka amin'ireo olony. Fiaraha-monina izany. Valio ny anarany. Ary antsoiko izy dia tonga izy, na aiza na aiza misy azy. Noana izy, mankany amin'ny vata fampangatsiahana mangataka sakafo amiko. Amin'ny maraina dia mangataka ronono ahy izy, amin'ny 10 alina dia matory izy. Mandry eo amin'ny fandriany eo akaikiko izy. Na dia rehefa maniry aza izy dia tonga any an-tranoko. Mihaino ny tabataba izy io. Zahao ny zava-drehetra. Tsara tarehy
Arahabaina noho izany fisakaizana izany, Ana. Ankafizo. 🙂
Izaho sy ny sakaizako dia manana zanak'ondry bicolor koa, toy ny saka izay hita amin'ny sary faharoa, ny anarany dia Agatita, ny hany maha samy hafa azy dia ny volombavany "Hitler" fotsy fotsy. Lahatsoratra tena tsara.
Faly izahay fa tianao izany, Sebatian.
Ny saka ko dia avy amin'ity karazany ity ary izay rehetra lazainao dia tena marina, ny saka dia manana ny maha-izy azy manokana hajaina ka raha manelingelina azy ireo loatra isika dia manomboka ady mitifitra (resy foana izy satria sosotra nefa ny tanako voany maratra sy voakaikitra) .
Rehefa mamindra ny tanako zigzag amin'ny faritra amboniny aho dia mihifikifi-doha toa ny hoe voageja. Tsy tiany ny irery ary raha miova mafy be izy, ary toa mahatsapa izay manodidina azy izy satria rehefa mijery zavatra na olona iray izy dia manadihady foana dia mihetsika avy eo
Mati dia hoy izy:
Salama, amin'izao fotoana izao dia manana saka roa aho, nanana telo aho fa ny saka alfàko kosa dia maty tamin'ny volana oktobra »Pingu» Siamese tsara tarehy izay tsy tadidiko isan'andro, izy no namako mahatoky nandritra ny 18 taona, na dia nanana izany aza izy tsara ny fiainana.
Izaho izao dia manana ny kely indrindra ratsy indrindra, imp miaraka amin'ny tongony antsoina hoe Tango izay natsangako tamin'ny tavoahangy ary olon-keliko / lehibe aho, miara-mipetraka amin'i Salem zanakay mainty sy be taraina izay tianay be na dia mavesatra be aza izy Raha misy maniry hiresaka sy hizara traikefa saka dia afaka mailaka amiko izy amin'ny: miati30@hotmail.com
Valiny tamin'i Mati
Francisco Muñoz de León Montero dia hoy izy:
Tena mahaliana ny lahatsoratra, manana saka an'ity karazana ity aho ary hitako amin'ny zavatra rehetra lazainao.
Valiny tamin'i Francisco Muñoz de León Montero
Smurf dia hoy izy:
Ny marina dia tena tiako ilay fampahalalana. Manana ny zanako tongotra 4 mandritra ny 9 taona aho. Mainty sy fotsy izy ary misy molotra tsara voatonona eo amin'ny orony mainty. Ampidiro raha te hahalala vaovao. Avy amin'ny mpanao volo iray tonga tao an-tranoko. Ary miteny amiko izy fa manavotra ny zanany eny an-dalambe ianao ary omenao azy ireo ho zanany. Eny ny valinteniko, mandra-pahatongan'ny olana ara-pahasalamako. Tsy maintsy najanoko ny fanaovana azy. Ary miteny amiko izy fa ny sisa tavela dia lehilahy saka be. Izay valiako raha izy no voavonjy voalohany, rehefa tonga avy tany Espana izy, ary lasa tiako be izy ka notehiriziko satria namako mahatoky izy. Gaga aho fa nilaza tamiko izy hitady Internet satria purebred ity saka ity. Izay tsy inoako, ary raha nisy na tsia. Efa zanako izy. Ka rehefa afaka andro vitsivitsy dia liana te hahafantatra aho. Ary toa izany raha hazakazaka, fitiavana, mamy, fahatokiana, fifaliana ary tsy manova azy na amin'inona na amin'inona aho. I Ash zanako (Alias ​​Pitu) zanako lahy ary hitohy mandra-pitenenan'Andriamanitra isika. Lazao ny ENY hamonjy sy hanangana.
Valiny amin'i Smurf
Ingrid dia hoy izy:
Ny saka voalohany dia bicolor mainty sy fotsy, ilay zazakely tao an-trano no namela ahy hitondra izany, iray tolakandro fotsiny dia nandeha namangy ny renibeko aho ary tsy niverina izy (mbola tsy fantatro ny antony tsy nisehoany, satria efa voadio izy) izao manana volomboasary sy volomboasary bicolor hafa ary tena hafa noho ny voalohany ... mbola malahelo ny saka voalohany
Valiny tamin'i Ingrid
Izao tontolo izao ny saka rehetra. Tsy manam-paharoa, ary tsy maintsy tianao izany amin'ny fomba anaovany azy.
Ara-dalàna ny malahelo an'ireo izay tsy miaraka amintsika intsony, fa ... mila mitazona ny fahatsiarovana tsara ianao ary mandroso, satria ohatra amin'ny anao dia manana olon-kafa mila anao hikarakara azy ianao.
Rocio Peña dia hoy izy:
Salama. Manana zanak'ondry bicolor mainty / fotsy aho. 2 taona izy. Ary be fitiavana izy. 6 volana lasa izay dia naka zanak'ondry miloko 2 volana izahay ary mifankahazo tsara. Saingy niova be tamiko ny zanako vavy, tamin'ny voalohany dia tsy purrs intsony toa ny taloha intsony izy, ankehitriny dia imbetsaka fotsiny izy no mangina ary mangina tokoa. Ary raha miaraka amiko izy ary tonga ny saka dia miala avy hatrany. Raha mbola mandinika ihany aho ary vao mainka aza mahatsapa fa tsy mitovy intsony izao
Valiny tamin'i Rocio Peña
Ny fahatongavan'ny alika kely dia ara-dalàna raha ovaina kely ny toetrany, amin'ity tranga ity, saka olon-dehibe izay efa tao an-trano. Na izany na tsy izany dia azo atao fa rehefa mihalehibe kely ilay zazakely ary milamina dia ho lasa toa azy indray ilay saka.
"Ataony izay hitiavan'ny olona an-tapitrisany maro amin'ny fitiavana erak'izao tontolo izao." Sady tsy voakitika. Izany no izy. Malaza noho izaho ny saka. Rehefa any ivelany izy, dia toa tsy zakan'ny mpandalo ny mampety azy, na dia mila miondrika aza izy ireo.
Hyacinth dia hoy izy:
Manana saka toa ilay ao amin'ny sary fahatelo aho. Manana hyperactivity be ianao. Ary tsy haiko raha tsy nifanerasera tamin'ny mbola kely izy na tena tia fiaraha-monina ka nanorisory ireo saka hafa. Hita eo amin'ny rindrina foana izy mamelaka azy te-hanaikitra azy ireo ary miaraka hatrany amin'ny fisehoan-javatra very saina. Ary tsy mandeha amin'ny laoniny izany.
Tiako izy, novonoiny aho. Saingy heveriko fa hitondra ahy any amin'ny fitsarana ireo mpiara-monina amiko. tpt
Valiny tamin'i Jacinto
Hehehe, misy saka manokana be mihitsy. Ny zava-dehibe dia salama tsara izy, ary faly, izay hita fa izy, ary dia izay.
Katty dia hoy izy:
Naka zazalahy kely avy an-dalambe aho izay tonga niaraka tamin'ny fanomezana ary tsy fantatro mihitsy mandra-piterany ary nahatonga ahy ho reniben'alika amboadia kely 3 sy chiky ary mainty fotsy izy ary toy ny nofaritana fa tsara sy malefaka. .. tiako amin'izy ireo ny fiainako ♥ ️
Valiny tamin'i Katty
Tena tsara, faly izahay fa tena tsara izy ireo 🙂
Ahoana no hikarakarana saka
Areti-mifindra ny olombelona ny mange saka